sumcadda sawirka: Isbahaysiga Bulshada ee UVM OSCR iyo ISGOOD
Wareegyada Taageerada iyo La Xisaabtanka
CoSA waa barnaamij dib-u-cusbooneysiin ku saleysan hannaan caalami ah oo dib-u-soocelin caddaaladdeed oo lagu caawiyo dembiilayaasha culus si ay dib ugula midoobaan bulshadooda. Tabaruceyaasha CoSA ee tababbaran waxay u shaqeeyaan kooxo saddex ilaa shan ah waxayna la kulmaan toddobaadle xubinta muhiimka ah si ay uga taageeraan ku soo noqoshada bulshada iyo maaraynta nolol maalmeedka. Tan waxaa ka mid ah:
iyadoo la raacayo xeerarka kormeerka ee ay dejisay Waaxda Asluubtu.
ku dhaqaaqida siyaabo aan dhaawici karin dadka kale.
qaadashada masuuliyada ficillada qofka adoo ka kabanaya dembiyadii hore.
helitaanka caawimaad dhibaatooyinka maskaxda ama shucuurta sida balwadaha, niyadjabka, ama naafonimada waxbarashada.
ku celcelinta dabeecadaha iyo dabeecadaha cusub ee wax soo saar leh.
diyaarinta baahida gaadiidka.
abuurista iyo ku noolaanshaha miisaaniyadda.
sameynta xalal wax ku ool ah dhibaatooyinka.
Hadafka CoSA waa inuu xoojiyo nabadgelyada bulshada iyo hagaajinta cilaaqaadka iyadoo la taageerayo xubnaha muhiimka ah si loogu guuleysto dib ugula soo noqoshada bulshada oo aan loo geysan dembiyo dambe. Wareega CoSA wuxuu ka caawiyaa xubinta muhiimka ah qaadashada barashada iyo is-wacyigelinta laga helay daaweynta loona adeegsado nolol maalmeedka. Intaa waxaa sii dheer, goobaabintu waxay la xisaabtami doontaa xubinta muhiimka ah ee u hoggaansamida rajooyinka sii-deynta kadib iyo horumarinta xiriiro caafimaad leh. Maaddaama xubinta aasaasiga ahi ay korayso oo ay dib u dhisayso isku xirnaanta bulshada, goobadu waxay matali doontaa baahiyaha bulshada ee xiriirka kuwa xubinta muhiimka ah.
Kala xiriir Stuart Recicar taleefanka (802) 540-1719 ama srecicar@burlingtonvt.gov si aad wax dheeraad ah uga ogaato.
Naga caawi inaan sii haysano “bulshada” ku jirta
Xarunta Caddaaladda Bulshada!
Hoos ka eeg fursadaha tabaruca ee hadda jira:
Miyaad u tudhi kartaa laba saacadood usbuucii si aad gacan uga geysato keenista sinnaanta iyo caddaaladda Burlington?
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto xubnaha bulshada ee jaaliyada ah wax ka qabashada saameynta fal dambiyeedka iyadoo laga eegayo dhinaca mas'uul mas'uulka ka ah (dembiilaha) iyo dhinacyada ay saameysay (dhibanaha) Kooxdani waxay sahmin doontaa dhibaatooyinka loogaystay shakhsiyaadka iyo bulshada waxayna ka caawin doonaan kooxda masuulka ah inay wax ka saxaan.
Waxaan si gaar ah u daneyneynaa inaan ku dadaalno inaan metelno kala duwanaanta bulshadayada (da'da, jinsiyadda, aqoonsiga jinsiga, diinta, xaaladda dhaqan-dhaqaale, iwm.)
Nidaamkeenu wuxuu ku lug leeyahay hanuuninta mutadawiciinta ah 1/2 saacadood, codsi qoraal ah, wareysi, tixraac iyo baaritaanka asalka, ka-dhaafitaan mas'uuliyadeed, heshiis qarsoodi ah, iyo qoto-dheer, 12 tababar tababar dhaqan celin. Fadlan kala xiriir Rachel Jolly lambarka (802) 865-7185 ama rjolly@burlingtonvt.gov si aad iskaga diiwaangeliso hanuuninta.
Ku taageer dhibbanayaasha
Ku deeqida alaabta ama adeegyada
Isbarbar dhigga Caddaaladda ee Dhibbanayaasha Dambiga waxay had iyo jeer ku mahadsan yihiin adeegyada lagu deeqay (duugista, nadiifinta guryaha, dayactirka baabuurta, iwm ...) ama beddelka alaabta la xaday. Kala xiriir Kim Jordan (802) 264-0764 ama kjordan@burlingtonvt.gov si aad wax dheeraad ah uga ogaato.